HABSHUMMAAN DHUKKUBA KAANSARIITI !!!! – SEENAA Y.G (2005 | OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA
HABSHUMMAAN DHUKKUBA KAANSARIITI !!!! – SEENAA Y.G (2005
March 6, 2017 OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATAA.ORG	Leave a comment
HABSHUMMAAN DHUKKUBA KAANSARIITI !!!!
Miidhaan gama kamiinu qabsoo Oromoo fi Ummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru hundi, Ummati Oromoo sagalee tokkoon walabummaa isaa akka labsatuuf isa gargaara malee, kan gabrummaatti isa geessu miti. hidhaan , hiraarriin, dararri, ajjeechaan, saamichii fi ummata keenya godaansisuun, akkasumas Biyyaa Baasuun dhuma irratti walitti qabamee, Ummati Oromoo Biyya walaboomteetti akka amanuu taasisaa jira malee, miidhaan har’aa gonkumaa gabrummaa keenya hegaree ka mirkaneessu miti. miidhaan har’aa tokkon tokko mana Oromoo seentee, warra gabroonfataaf maal jechuu akka ta’ee itti himuun hin barbaachisu. Waan isaan ofitti harkisaa jiran hundisaa , badii isaanii kan dhiheessu malee, habjuu waliin jiraannaa kan dhaamuu miti.
“ ABO ”n , MAQAA MITII !!! KAAYYOO UMMATA OROMOOTI !!!
Ega Bara gabrummaa jalatti kufnee kaasee, waan nu irratti raawwatamaa jiru, murtii fi tarkaanfii Oromoon itti deemuuf wabii ta’aa jira. Addunyaan hegaree Itoophiyaaf yaaddoo seenanii jiru. Itoophiyaan Mootoota adda addaa itti dabarsanii jiraachisuuf yaalan, bara wayyaanee kana , qarqara irra geessetti. Itoophiyaan isaan sirna Fedaraalaan kabeebsiina jedhanii heyyeessa cabsanii abbootii irree ittin duroomsan sun, har’aa Itoophiyaa qarqara boollaa irra jirtu baraaruu hin dandeenye. Kanaaf Biyya isaaniif fala taatu barbaadachaa jiru. Habashoonni sagalee qofaan iyyaa jiran, dhugaa kana osoo ijaan arganii simachuuf yaada cabsaa jiru. Itoophiyaan sobaan afuura itti guuran, saboota Biyyatti 87 keessaa 2 qofaan gonkumaa jiraachuu akka hin dandeenye dhugoomee jira. Biyyi Itoophiyaa jedhamtu bara wayyaanee booda waan jirtu hin fakkaatu. Biyyi Itoophiyaa jedhamtee yaalii biraan lubbuu itti horan hin jiraattu. Kun dhaadanno miti. dhugaadhaa !!!dhugaa fagoo osoo hin daamnee arguuf teenyu. Warri adeemsa qabsoo hadheeffatee, ykn obsa dhabee sagantaa jijjiirratanii dafanii manatti galanii taa’uuf jarjaran, dubbiin akka isaan yaadan akka hin taanee beeku qaban.Biyyoonni dhihaa sagantaa kana jijjiirree malee nu hin gargaaran jedhanii sababaa okkalaa dhiheeffatanii obsa fixachuu ykn habashummaa keessaa dhikkifattu raawwachuu barbaadu, inumaa karaa isaan irra jirantu fagoo ta’uu hubachuu qaban. Itoophiyaan wayyaaneen ol kaasee jettu, kan cirracha irratti ijaaramtee ta’uu hubachuu qaban. Dhukkubni habashummaa fi dhugaan walirraa fagoo jiran.
KALEESSA ISA HAR’AA HAWWINA TURRE !!!! HAR’A AMMOO,,,!!
Biyya abbaan isaayyuu abdii itti kutatee jiru, inni keenyaa maaliif akka arreedaafii jiru naaf hin galu. Siyaasin addunyaa shiraa fi hammeenya meeqaan gaggeeffamaa jira. Kan keenya adeemsa siyaasaa kanatti dammaqee, ITOOPHIYAA irri ishee bareedaa gara awwaalchaatti gaggeeffamaa jirtu, maaliif akka hubachuu dhaban namaaf hin galu.warri dhihaa Biyya Itoophiyaa jedhamtuuf umurii dabaluuf hamileen qaban dhumataa dhufeera. Dhiigin dhaloota har’aa fi qabsaa’ootaa cichoomiinaan jiranii kana dhugeesse jira. Beektoonni keenya gabaa galteetti maaliif harree akka oofan namaaf hin galu. Shira ABO balleessanii Itoophiyaa dhumattee keessa jiraachuuf akka arreedan namaaf hin galu. UNESCO n gadaan siran Ummati Oromoo dur ittin bulaa turee jedhee fudhachuun isaa maal akka ta’eellee kan isaaf hin gallee, amala habashummaan kan dhukkufataa jiru qofaadhaa.
Beektoonni fi namoonni guguddaa keenya jennuu maaliif gabaa galteetti harree oofuu ? yoo jennee HABASHUMMAATU itti taphataa jiraatu deebii ta’aa. Habashummaan wal fonqolchuu nama barsiisa. Hattummaa nama barsiisa. Shira wal kuffisuu fi wal diiguu nama barsiisa. Obsa waliif dhabsiisa.yoo kan koo ta’e malee jedhanii ofittummaan akka maraatan nama taasisa. Habashummaan hedduu , hedduu rakkisaadhaa. Dhukkuba kaansariitii. Dhukkubii kun fayyuu kan danda’uu ykn dhabamuu danda’uu abbuma qabatee sanaan yoo dhabamee qofaadhaa. Beektoonni keenyaa fi akitivistoonni keenya , Qabsoon Biyya alaa taa’aani hin gaggeeffamu jedhanii isa kaan qeeqaa , ofii Biyyuma alaatti dhaaba siyaasaa fi waan afooshaan gadiif wal waamu. Seenaa qabsoo ummata Oromoo keessatti waan qaanyii fi salphinaa, bara 2015 kaasee argaa fi dhaga’aa jiru kanadhaa. Ijoolleen Biyya keessaa hojii nama guddaa hojjattee, beekaan keenya biyya alaa ijoollee itti ta’ee.
Beektoota akitivistoota keenyatti hedduu qaanofnee jirra. Har’allee akkasuma. Hiriyyaa facebook irratti balaaleffannaa keessa wal bareetuu , jaala qabsoo isaa gansiisaa fi akka abaaru taasisaa jira. Namoota wal hin beeknee, garuu arrabsoo fi qeeqa keessa wal baranii warra maqaa wareegamtootaan waliif kakatee arrabsaa jiru. waa hedduu tarrisuu dandeenya. Jarreen amma har’aatti argaa jirru kun dhukubni isaanii gonkumaa Ummata ofiif dhukkufatuun wal hin qabatu. dhukkuba kaansarii habashummaa, kan umamaan wal nyaachisuutuu isaan dhukkubaa jira. Isatu aadaa wal dhaggeeffachuu ummata isaanii keessa jiru gansiisee , dhugaa haalsiisaa jira. Habashummaan gonkumaa qaanii hin qabu. Ummataaf waa tokkollee osoo hin hojjannee, akka gurmuuttu ummataaf beeksiisani murtii ummataa osoo hin argannee, Hooggana qabsoo Oromoo ofiif moggaasanii akka ija baasan taasisaa jira. Hoggana ofiin jedhanii ka’anii , mooraa qabsoo tokkomsiinaa jedhu. Hoggana ega ofiin jedhanii dhaaboota kam waamanii tokkomsuu ?
Beektoota keenyas ta’uu, akitivistoota farnjii jalaa qara’aniis haa ta’aanii, qabsaa’oonni kaleessaa fi kkf , bakka kudhan kan isaan dhaabee jiru , dhiigumaan Oromoo ofiin haa jedhan malee, aadaa fi jireenyi isaanii guutuun Habashummaadhaa. Dhukkuba kaansarii Habashumaatu isaan galaafataa fi salphisaa jira. Jarri biyya alaa of gawwamsituu kunneen, qabsoo Biyya keessaa irratti miidhaa tokkollee hin fidan. Maaliif jennaan Biyya keessaa dhukkuba habashummaan kan hammacamu gonkumaa waan hin jirreef. Addatti ABOn dhalootaa kaasees ta’uu adeemsa qabsoo isaa keessatti , warra dhukkuba kaansarii habashummaan maraatan of keessaa harcaasaa, warri dhukkuba habashummaan dhukkufatan keessaa ganaa fi ba’aa, har’a xaliila’aa waan jiruuf, Itoophiyaan habashumman yaaddofnuuf , Itoophiyaan haal habashootaa tikisuu fi abbaa biyyaa baadiyyaatti yaasuuf karoorfattee hojjachaa jirtu dhuma ishe ta’uu mirkaneessaa jiraachuun shakki hin qabu.
Mooraa qabsoo Oromoo kana booda amala habashummaan faalamuun isaa dhumataa deemuun murteessaadhaa. Qeerroon Oromoo gonkumaa amalaa fi dhukkuba habashummaan hammacamee , kaayyoo isaa irraa hin jallatu. Kan hedduu nama gaddisiisuu, beektoonni fi akitivistoonni keenya biyya keessaa yaa’anii Biyya alaatti dhukuba kaansarii habashummaan qabamanii wal nyaachuu fi wal salphisuun isaanii hedduu nama gaddisiisa. Dhiiga habashummaan faalamee gonkumaa fayyaa hin qabaatu. Aadaan habashummaa obboleyyan garaa walitti jabeessa. Hamilee fi ofittummaan guutamee gonkumaa dhiiga isaaf hin tolu. Dhiiga isaaf obsa dhabee, halgaaf jilbeenfachiisa. Fira isaa harka qabuu irra , halgaa gatiititti baachuu filsiisa. Habashummaan dhukkuba kaansarii hamaa namoota keenya miidhaa jiruudhaa.
Kanaaf dhukkubni Habshummaa dirree salphina irra osoo nu hin dhaabnee , lammii ofiif yaadurratti haa xiyyeeffannu. Wal ga’iin dhukkuba kaansarii Habashummaan gaggeeffamu gonkumaa hin milkaa’uu !!!!!!!!!!!!!!!!!!
HORAA BULAA !!!!!!!!!!!!!!! SEENAA Y.G (2005 )
Previous PostNAAN HIN JI’INAA…Next PostHABSHUMMAAN DHUKKUBA KAANSARIITI !!!! – SEENAA Y.G (2005